ယခုကောလဟာလတွင်ဇာတ်ကောင် ၁၂ လုံးလုံးအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားပြီ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးတွေ၊ ဒီတော့ဒီနေရာမှာစွပ်စွဲခံရတဲ့လိုင်းကနေဘာမျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတာကိုပထမ ဦး ဆုံးတွေ့မြင်ရတယ်။
သင့်တယ် နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများ ဒီနှစ်ရဲ့တတိယပေါ်မှာ စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး - အောက်ပါ အသက် 71029 စီးရီး 21 နှင့် 71030 Looney တီးလုံး - ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းထွက်ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်ဖြောင့်မှဆွဲထုတ်ထားသောစာတစ်ဒါဇင်ကိုကြည့်နေသည် Marvel၏ပထမနှစ် Disney+ ပရိုဂရမ်းမင်း။
ဆိုလိုသည်မှာ WandaVision၊ Falcon နှင့် Winter Soldier, Loki နှင့် What If …တို့ကိုအခြေခံထားသောအသေးစားဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။ လေယာဉ်မှူးသုံး ဦး သည်လေယာဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်လက်ရှိထုတ်လွှင့်နေသည်) နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ် စတုတ္ထအဘို့ကိုအွန်လိုင်းကျဆင်းသွားသည် - ဖြစ်စဉ်အတွက်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအတွက်ကွက်လပ်ဖြည့်။
ဒီမှာပါ ၀ င်လာတဲ့ဇာတ်ကောင်တိုင်းအတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုပါ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးများ, ငါတို့သည်သူတို့ minifigure ဒီဇိုင်းများအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာနှင့်အတူ။
WandaVision မှအက္ခရာသုံးခုကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းထဲမှတစ်ခုသည်ခေါင်းစဉ်အက္ခရာများ၏တစ်ဝက်ဖြစ်သည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်မှာမအံ့သြသင့်ပါ။ Wanda ဟာသူမ Scarlet Witch အပြည့်အ ၀ သွားပြီးတဲ့နောက်ပြသပွဲမှာသူရဲ့အသွင်အပြင်ကိုအခြေခံပြီးပုံဖော်လိမ့်မယ်။ သူကပုံသွင်းထားတဲ့ Dual-molded arm, cape၊
အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် Marvel အသေးစားပုံများတွင်လက်သို့မဟုတ်ခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်းပါရှိသည် - 76178 နေ့စဉ် Bugleအက္ခရာအမြောက်အမြားသည်အခြေခံအားဖြင့်နှစ်ခုလုံးကိုချန်လှပ်သည် Spider-Man - ထို စုဆောင်းထားသောအသေးစား ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားအစွန်းရောက်ထိလေ့ရှိပါတယ်။ White Vision အပါအ ၀ င်ဒီကိန်းဂဏန်း ၁၂ ခုလုံးအတွက်အသေးစိတ်အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါ။ သူသည်ပုံသွင်းထားသည့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်း၊ ခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဘေးထွက်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Monica Rambeau သည်တတိယနှင့်နောက်ဆုံးရုပ်ပုံအသေးစားတစ်ခုဖြစ်သော WandaVision မှလှုံ့ဆော်ခံရသည်ဟုဆိုလျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှစ်ခုသာပါ ၀ င်သည်။ ကောလဟာလများကိုမဖော်ပြရသေးသော်လည်း SWORD စစ်သားအတွက်ဆံပင်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုလည်းမျှော်လင့်သင့်သည်။ Lego Group ၏လက်ရှိဒြပ်စင်များသည်အမှန်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
The Falcon နှင့် Winter Soldier မှဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး သည်ဒါဇင်ဒါဇင်များအနက်ပါဝင်သည်ဟုခန့်မှန်းတွက်ဆခြင်းအတွက်ဆုမရှိပါ Marvel ဒီစီးရီးထဲကအသေးစား, ဒါပေမယ့်သင်ကဆမ် Wilson ကသူ၏ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်အဖြစ်သူ၏နောက်ဆုံးပုံစံအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည်ဟုထင်လျှင်, သေးငယ်တဲ့ဆုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အသေးစားရုပ်ပုံတွင်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအတောင်ပံများ၊ ပုံစံနှစ်မျိုးနှင့် Cap ၏အထင်ကရအကာများပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသော Bucky Barnes သည် Sebastian Stan ၏ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ Disney+ စီးရီး။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသေးစားပုံမှအသေးစိတ်မမျှော်လင့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးပုံနှိပ်ထားသောလက်နက်များ၊ ဓားများနှင့်ဒိုင်းလွှားများကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ နောက်ထပ် Captain America ဒိုင်းလွှားဖြစ်နိုင်မလား
အခုကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်အပိုင်းအခြားငါးခုထဲကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဝင်သွားကြပြီ MarvelLoki ၏ကောလာဟလသတင်းများအရမျှော်လင့်ရမည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ Loki ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးသူ၏ TVA ယူနီဖောင်းတွင်နောက်ကွယ်မှပုံနှိပ်ထားသော 'VARIANT' ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲက Throg ကိုကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။
Lady Loki ဟုပထမ ဦး ဆုံးကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုအလားအလာရှိသောအသေးစားရုပ်ပုံများကို Loki Laufeyson ၏မူကွဲ Sylvie Laufeydottir ကိုအခြေခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်ပုံစံအသစ်၊ ပုံနှိပ်ထားသောလက်နှင့်အစိမ်းရောင်ဓါးထပ်ဆောင်းပစ္စည်းများထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားထားသည်။ Sylvie သည်သူမနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ရှင်းလင်းသောအဝတ်အစားကိုပေးသောအသေးစိတ်ပုံစံအတွက်မလုပ်နိုင်သောအခြားဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သည် - သို့သော်ချိုသောဆံပင်ပုံစံသည်အလွန်အေးမြသင့်သည်။
ငါတို့မှာအနည်းဆုံး Captain C တစ်ခုရှိပြီart76201 ဗိုလ်ကြီးကို C အတွက် er minifigurearter & အဆိုပါ Hydra Stomper ပေမယ့် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးများသည် Peggy C ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်လာမည်ဟုသတင်းများကဆိုထားသည်artဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်အဖြစ် er ။ အကယ်၍သာ လျှင်…။ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း၊ Captain ဗြိတိန်ဒိုင်းလွှားနှင့် Tesseract တို့ပါဝင်သည်။
အကယ်၍ ... အကယ်၍ ... ? '၏ ပို၍ ထူးကဲသောအခြေအနေများတွင် Avenger များသည် Zombified ခံရသည်ဟုထင်ရသည်။ ကာတွန်းစီးရီး၏ sizzle reel မှ Captain America ကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရသေးပါ။ သို့သော်နောက်တွဲယာဉ်ကစတိဗ်ရော်ဂျာ၏စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်ကိုအသေးစားပုံစံဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကောလဟာလများတွင်ပုံသဏ္moldာန်နှစ်မျိုးရှိသောခြေထောက်များနှင့်ဖုတ်ကောင်များပါဝင်သည်။
Peter Quill အစား T'Challa သည် Star Lord ဖြစ်လာလျှင်ကော။ ၎င်းသည်စက္ကူပေါ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအလားမဟုတ်ပါ၊ မဖြစ်နိူင်သော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်တွင်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ အနည်းဆုံး What If အတွက်နောက်တွဲယာဉ်အသစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ပုံမှန် Star Lord ဟောင်းနည်းတူ T'Challa ၏အသေးစားရုပ်ပုံကားချပ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုနှင့်အတူသံခမောက်လုံးနှင့်ဆံပင်ပုံစံနှစ်မျိုးပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာပုံစံတခါမှမတွေ့ဖူးသေးသောစာလုံးနှစ်လုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Spider Supreme သည်နောက်ဆုံး၌ What If …? တွင်ပေါ်လာသည်။ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ပိုစတာ။ ကောလာဟလသတင်းများအရသူ၏ဒီဇိုင်းသည်အခြားတကယ့်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများအပေါ်အခြေခံထားပုံရသည်။ Peter Parker သည် ဦး လေးဘင်ကိုကယ်တင်သည်၊ Doctor Strange ပုံစံအငူပါ ၀ င်ပြီး The Tonight Show ၏အိမ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
minifigure သည်အသစ်သော cape element အပါအ ၀ င်၊ 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာPeter Parker ကိုပြသရန်အခြားခေါင်းတစ်လုံးနှင့်ဆံပင်ပုံစံနှင့်အတူအသေးစိတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Gamora သည် Thanos အား Mad Titan အဖြစ်အစားထိုးသည့်အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အနည်းဆုံး What If ... ? ၏ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်နောက်ဆုံးကောလာဟလများအတွက်အခြေခံအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဇာတ်ကောင်။ ပြပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ်ကဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်နိုင်ပေမယ့်ပိုစတာအသစ်ကနေပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးကိုသင်ရနိုင်တယ်။ ပုံသွင်းခြင်းနှင့်ခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအသေးစားရုပ်ပုံသည်သင်မြင်ရသောနှစ်ဖက်မြင်ဓားပါဝင်သည်။
အမြဲလိုလို၊ ဒီကောလဟာလသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသေချာစွာမသေချာမချင်းသတိပြုပါ Lego အုပ်စု။ အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မျှော်လင့်ရမဲ့အရာတွေကိုတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။
← အတည်ပြုပြီးနှင့်ကောလာဟလသတင်းများအတွက်ထုတ် LEGO အစုံ Marvelဘာလဲ ... ? နောက်တွဲယာဉ်
LEGO သည် San Diego Comic-Con 2021 အတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်။ →